Sidee loo yareeyaa madax xanuunka: kula dagaalan madax xanuunka khiyaanooyinkaan | Ragga Stylish
Xaqiiqdii in kabadan hal munaasabad waxaad jeclaan laheyd qof inuu ogaado sida sixirka looga yareeyo madax xanuunka. Inta aan sugeyno maalintaas soo socota, waa inaan u degno talooyinka wax ku oolka ah iyo tabaha nolosha oo dhan.
Soo ogow waxa sida ugu fiican u shaqeeya marka aad u baahato ka takhalus madax xanuunka si aad ugu sii wadato hawl maalmeedkaaga oo aad joojiso dareenka ah in qof go'aansaday inuu kugu soo rogo doorka kubbadda ee adiga ciyaar kubbadda cagta ah.
1 Tilmaamaha iyo Tabaha loogu talagalay Gargaarka Madax xanuunka
1.1 Is dehso meel deggan
1.2 Si qoto dheer u neefso
1.4 Hel duugis
2 Madax xanuun ma laga hor tagi karaa?
2.1 Si fiican u naso
2.2 Kordhi tayada hurdadaada
2.3 Baro sida loo maareeyo culeyska fekerka
2.4 Layli jimicsi
Tilmaamaha iyo Tabaha loogu talagalay Gargaarka Madax xanuunka
Tilmaamaha iyo tabaha soo socda ayaa kaa caawin kara inaad iska yareyso madax xanuunka. Ballan ka sameyso dhakhtarkaaga haddii madax xanuunkaagu sii socdo, aad u daran yahay ama ay la socdaan astaamo kale, sida dawakhaad ama aragti labalaab ah.
Is dehso meel deggan
Maaddaama iftiinka iyo buuqu u muuqdo inay dhibaatada ka sii darayaan, joog meel xasilloon illaa madax xanuunka ka tagayo. Haddii aad fursad u hesho, waxa ugu habboon ayaa ah inaad nasato inta aad u aragto inay lagama maarmaan u tahay qol mugdi ah oo deggan.
Inta badan madax xanuunka waxaa sababa culeys jireed ama maskaxeed oo aad u badan, ujeedka istiraatiijiyaddan ayaa si sax ah looga caawinayaa inaad nasato jirkaaga oo dhan. Si aad uga faa iideysato, hubi inaad dabciso murqaha (gaar ahaan qoorta iyo garbaha) iyo, haddii ay suurogal tahay, indhahaaga xidho ugu yaraan daqiiqado.
Si qoto dheer u neefso
Farsamooyinka neefsashada ayaa kaa caawin doona inaad iska yareyso madax xanuun uu sababo walaac. Mid ka mid ah farsamooyinka ugu isticmaalka badan wuxuu ka kooban yahay qaado dhowr neefsasho qoto dheer, adiga oo si tartiib ah hawadda u soo bixinaya markasta. Ha welwelin haddii aadan sameyn karin adiga oo hor fadhiya badda ... kursiga kuraasta ee xafiiskaaga ayaa sidoo kale kuu shaqeyn doona. Waxaad ubaahantahay daqiiqado kooban naftaada.
Roobku wuxuu noqon karaa mid aad u nasasho badan oo nasasho leh, waana wax aad fursad u heshay inaad la kulanto marar badan. Thanks to awooda nasashada weyn ee biyaha, qubeyska ayaa sidoo kale kaa caawin kara inaad nadiifiso madaxaaga oo aad dib u bilowdo howlahaaga xoog cusub. Haddii aad ku sugan tahay xafiiska, waxaa jira waxyaabo kale, sida inaad shukumaan qoyan saarto qeybta dhaawaca (badanaa qoorta iyo foodda) daqiiqado yar.
Biyo kulul mise biyo qabow? Labada ikhtiyaarba way wanaagsan yihiin, dhammaantood waxay kuxiran yihiin dookhaaga shaqsiyeed. Dadka qaarkiis waxay dareemaan raaxo badan biyo diirran, halka kuwa kale ay doorbidaan inay qabow noqdaan, oo xitaa waxay geliyaan baraf ku duudduuban shukumaan.
Hel duugis dabci muruqyadaada oo yaree calaamadaha madax xanuunka kacsan, oo ah nooca ugu caansan. Madax xanuun badanaa wuxuu dhacaa marka la waayo cid kuu duugta. Xaaladdaas, iskuday inaad adigu sameyso. Sidee? Mid aad u fudud: adoo isticmaalaya tilmaamaha farahaaga, si tartiib ah u xoq meelaha ay ku xanuunsato inta aad u baahan tahay.
Madax xanuun ma laga hor tagi karaa?
Cadaadisku waa sababaha ugu waaweyn ee madax xanuunka. Sidaa darteed, sameynta waxyaabo looga hortago buuqa ayaa sidoo kale kaa caawin doonta yareynta halista madax-xanuun. Waa in la ogaadaa in madax xanuun sidoo kale ay sababi karaan arrimo kale, hiddo ahaan tusaale ahaan.
Si fiican u naso
Si looga hortago madax xanuun, aad ayey muhiim u tahay in la helo hurdo tayo leh habeen kasta. Markaad si fiican u nasin weydo, maalinta ku xigta waxaad dareemeysaa daal, taas oo kordhinaysa fursadaha dhibaatadani u muuqan karto.
Kordhi tayada hurdadaada
Fiiri maqaalka: Waxyaabaha saameeya tayada hurdada. Halkaas waxaad ku ogaan doontaa waxyaabaha kaa horjoogsanaya inaad si fiican u seexato iyo macluumaad xiiso badan oo ku saabsan nasashada.
Baro sida loo maareeyo culeyska fekerka
Waxa ugu waxtarka badan waa in laga fogaado xaaladaha walaaca leh, in kasta oo aan ognahay in inta badan taasi ay tahay wax aad u adag ama si toos ah aan macquul ahayn. Sidaa awgeed, waa inaad barataa sida loo maareeyo fekerka oo looga hortago inuu la wareego jirkaaga. Wuxuu ku bilaabmayaa meel u dhig ajandahaaga maalin kasta si aad u qabato waxqabad aad in badan ka heshay. Waxay noqon kartaa wax kasta oo ka mid ah inaad khamri ula baxdid asxaabtaada iyo wax aad u fudud sida akhrinta buugga.
Waxaa jira dad badan oo bartay sida loo yareeyo madax xanuunka iyada oo loo marayo farsamooyinka nasashada, laakiin farsamooyinka nasashada ayaa xitaa ka sii fiican habka ka hortagga. Neefsashada, yoga iyo fikirka ayaa ka mid ah farsamooyinka kaa caawin kara inaad yareyso fursadahaaga inaad ku xanuunsato madax xanuun.
Sidaad filan karto, jimicsiga joogtada ahi wuxuu kaloo ka hortagaa isku buuqa iyo madax xanuun. Ku eedee dusha 'endorphins'. Sida muuqata, wax kasta oo aad sameyn kartid si aad noloshaada ugu heshid wadada saxda ah ee caafimaad qabta ayaa kaa caawin doonta kahortagga madax-xanuun. Isboortiga ka sokow, taas waxaa ka mid ah ka fogaanshaha tubaakada iyo aalkolada iyo cunidda cunto isku dheellitiran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Sida loo yareeyo madax xanuunka